Talo Qoys: 5, walxood ka fogow xilliga Galmada! | Gaaloos.com
Home » galmada » Talo Qoys: 5, walxood ka fogow xilliga Galmada!
Talo Qoys: 5, walxood ka fogow xilliga Galmada!
Haddii aad guursatay iyo haddii aad hadda dooneyso in aad yagleesho guri, ugu horreyn waa in aad ogaato in guurka iyo qoysnimadu aanay kamid ahayn, wixii aad ku soo baratay fasaladaadii Sayniska, islamarkaana aanay ku jirin waaya-aragnimada aad si uun uga hesho bulshada aad la nooshahay, reernimada iyo galmadu waxa ay xambaarsan yihiin caqabado waaweyn oo badan.
Halkan waxa aan kuugu soo gudbineynaa dhowr walxood oo ay tahay in aad ka fogaato, oo aadan samayn marka aad kulmeysaan adiga iyo lammaanahaaga guurku, sababtu waa si loo dhowro bedqabka Galmo caafimaad leh.
Ha diidin (Ha mucaaradin)
Sameey oo yeel sida iyo waxa uu doonayo qofka lammaanahaaga ah, tusaale nooca dharka aad soo xiraneyso, goobta aad ku kulmeysaan, habka ay galmadu u dheceyso, haddii aad sidaas yeesho ma dhici doonto dhibaato qalqalisa jawiga aad ku jirtaan, hayeeshee haddii aad diiddo waxa uu doonayoo wadaygaagu, waxa dhici karta dhibaato jawiga ka dhigto mid xun, oo ay adag tahay xitaa in laga faalloodo.
Waxa lagayaabaa in dhallinyarada qaarkeed gaar ahaan raggu ay u arkaan, in lammaantoodu ay jeceshehay hadal dabacsan oo malaha ku lammaanan jawiga Galmada, hayeeshee taasi maba ah mid ka turjumeysa xaqiiqada dhulka taal.
Marka ay Galmadu billaabato, dareenka lammaanayaasha caafimaadka qabaa, waxa uu intiisa badan xoogga saaraa dhanka raaxada, taasna waxa sabab u ah farriimaha ay maskaxdu u dirto jirka intiisa kale iyo amarada xiriirka ah ee dareen-wadku siinayo jirka, sidaas awgeed waa in aad aamusto in yar, ereyada qaarkood iyo xitaa weeraha barkood, waxa suurtagal ah in ay caawiyaan sidii jawiga Galmadu u noqon lahaa mid dabacsan, hayeeshee marna la ma ogola in aad hadal badan tixdo.
Ha iska indha-tirin qofka kula wadaagaya Nolosha
Jirkaagu marka uu caafimaad qabo, xilliga Galmada isaga ayaa maamulaya fariimaha iyo amarada ay maskaxdu u soo dirto, balse waa in aad adigu garato oo aad ogaato astaamaha iyo calaamadaha ka muuqan kara xaaskaaga iyo ninkaaga, sida calaamadaha muujinaya rabitaanka, Raaxada, hurdada, Xannuunka iyo laxawga, ha isku qaban indhahaaga si ku tala-gal ah, wadaaygaagu waxa uu kaa filayaa in aad muhiimad siiso daqiiqadaha ay galmadu socoto.
Ha u ordin Musqusha
Shaki kuma jiro in Qubeyska iyo mayrashadu ay aad u fiican yihiin kadib Galmada, haddana waa in aadan si dhaqsi uga kicin gogosha, sida in lagu hayo oo kale, talada caafimaadka ee warbixintani xambaarsan tahay ayaa ah in aad muddo gaaban joogto gogosha, adeegso maro jilcan, harqad, Tuwaal ama shukumaan qoyan, si qoto dheer u neefso, kadib waxa aad tegi kartaa Suuliga ama Musqusha.
Si degdeg ah ha isugu diyaarin kulanka
Galmadu ma ah ciyaar, qofka kula wadaagaya ee xaaskaaga ama ninkaaguna ma aha qof doonaya in uu kula tartamo, haddii aad tahay raga biyo-degdegga qaba ama dumarka aan dareenkoodu Galmadu lahayn, qaybta rabitaanka, isku mashquuli oo maskaxdaada ku jeedi waxyabao kale oo ka baxsan kulanka, taasina waxa ay kugu caawin doontaa in biyo-degdegga iyo dareen la’aantu ay dib u dhacaan.
Title: Talo Qoys: 5, walxood ka fogow xilliga Galmada!